horonantsary - Xingtai Huimao Trading Co., Ltd.
Xingtai Huimao Trading Co., Ltd, dia mpanamboatra sy mpamatsy vola amin'ny fiara fitateram-bahoaka. Ny orinasanay dia miorina ao amin'ny Jvlu Industrial Zone, Xingtai City, Hebei Province, mifantoka amin'ny sehatry ny famokarana ny faritra misy tombo-kase vita amin'ny kofehy sy menaka mandeha amin'ny fiara, toy ny tombo-kase misy menaka, O peratra, gasket, kirihitra sns.
Ny orinasanay dia mandrakotra velaran-tany mihoatra ny 1300 metatra toradroa ary manana traikefa amin'ny famokarana manan-karena eo amin'ny sehatry ny tombo-kase fingotra nandritra ny 20 taona mahery hatramin'ny nananganana azy. Ny orinasa dia manana atrikasa fametahana, atrikasa famolavolana solifara, atrikasa fanavaozana, atrikasa famonosana, atrikasa fanavaozana, atrikasa famonosana
Ny orinasanay dia manana maherin'ny 20000 lasitra bobongolo sy tahiry akora lehibe, manana traikefa ampy hiatrehana ny tombo-kase amin'ny haino aman-jery isan-karazany sy ny toe-javatra iasana isan-karazany.
Izahay dia mpanamboatra OEM, fampiroboroboana ny kojakoja fiara nomen'ny mpanjifa. afaka manome fepetra ara-teknika sy fanohanana ara-teknika izahay amin'ny filan'ny mpanjifa.
Serivisy fitehirizana fiara fitateram-piaramanidina, raha manana fanontaniana ianao, aza misalasala mifandray aminay
Tombo-kase vita amin'ny landy, Auto Accessory, Fizarana famehezana, Groove solika, Fehezo ny bushing arm, Piesy detase,